သတ္တုတွင်း thermo လျှပ်စစ်မီးဖို၏ဖုန်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: မိုင်းအတွက်ဖုန်စုဆောင်း,မိုင်းခွဲစက်အတွက်ဖုန်ကောက်ခံသူ,မိုင်းသည်ဖုန်ကောက်ခံသူကိုသယ်ဆောင်သည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > သတ္တုတွင်း thermo လျှပ်စစ်မီးဖို၏ဖုန်စုဆောင်း
သတ္တုတွင်း thermo လျှပ်စစ်မီးဖို၏ဖုန်စုဆောင်း
 သတ္တုတွင်း thermo လျှပ်စစ်မီးဖို၏ဖုန်စုဆောင်း
သတ္တုတွင်းအပူစွမ်းအင်မီးဖို၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများသည်အဖုံးတစ် ၀ က်၊ အဖုံးအပြည့်၊ အဖုံးအပြည့်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ Top West ပါးပျဉ်းသို့မဟုတ်အလှည့်အဖုံး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလျှပ်စစ်မီးဖိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများ၏ PL အမှုန့်စုဆောင်းမှုကိုအပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန် ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်ရှိသည့်အထည်အိတ်နှင့်ဖုန်စုပ်စက်၏ရှေ့မှောက်မီးပွားဖြည့်စွက်ခြင်းကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ။ စစ်ဆင်ရေးအပြည့်
3. မီးခိုးငွေ့နှင့်ဖုန်မှုန့်ကိုအလုပ်ရုံ၏အမိုးတွင်မတွေ့ရှိနိုင်အောင်မီးခိုးဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူနှုန်းသည် ၉၈% ရှိသည်။
4, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏ထိရောက်မှု> 99% ။
၅။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရှိဖုန်မှုန့်ပမာဏသည် <10mg / m3 ရှိသည်။
၆။ ကာလရှည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာနည်းပါးပြီး၊ တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
7. လေတိုက်စက်အခန်း၏ဆူညံသံ <80dB ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ flue တွင်ပြာစုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း Ash ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: မိုင်းအတွက်ဖုန်စုဆောင်း , မိုင်းခွဲစက်အတွက်ဖုန်ကောက်ခံသူ , မိုင်းသည်ဖုန်ကောက်ခံသူကိုသယ်ဆောင်သည် , ဆေးရွက်ကြီးအတွက်ဖုန်စုဆောင်း , slot များအိတ်ဖုန်စုဆောင်း , မြို့ပတ်ရထားဖုန်စုဆောင်း , ကြိတ်စက်အတွက်ဖုန်စုဆောင်းအိတ် , Hot Sale နှင့်အတူဖုန်စုဆောင်း